Miyay Juventus Ku Guuleysan Doontaa Tartanka Ay U Waalanayso Ee Champions League? Cristiano Ronaldo Qudhiisa Ayaa Jawaab Bixiyay. - Gool24.Net
July 30, 2019 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay wax ku saabsan arrimaha kooxdiisa Juventus iyo haddii ay dhawaan ku guuleysan doonto tartanka ay aadka u doonayso ee UEFA Champions League.
Kaddib markii sanadihii ugu dambeeyay ay awood cad kusoo qabsatay kubadda cagta Talyaaniga isla markaana ay siddeed jeer oo xidhiidh ah kusoo guuleysatay horyaalka Serie A ayay Juventus haatan diirada ku haysaa Champions League.
Xilli suuqii hore ayay ahayd markii Bianconeri ay qaadeen talaabo weyn oo ay ku doonayaan hanashada tartankaas waxaana ay lasoo wareegeen Ronaldo qudhiisa oo ay u arkaan mid riyadooda rumayn kara.
Cristiano Ronaldo ayaa shan jeer isagu kusoo guuleystay tartankan kaddib markii uu afar jeer lasoo hantay kooxdiisii hore ee Real Madrid isla markaana uu hore hal mar ugula soo guuleystay Man United.
Si kastaba, Haatan CR7 ayaa qaba aragtida ah in Juve ay ku guuleysan karto Champions League isla markaana ay leedahay awoodaas waxaana uu si kooban ugu jawaabay mar la weydiiyay haddii ay CL ku guuleysanayaan “Wuu imanayaa”.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa sheegay inuu u baahday koox bedelasho iyo tartan cusub oo uu dhiirigelin ka helo kaddib markii oo koobab iyo abaalmarino badan oo shaqsi ah la qaaday Madri.
CR7 oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi “Kaddib markii aan ku guuleystay wixii aan ku qaaday Real Madrid waxaanu baahday isbedel iyo dhiirigelin cusub”
Juventus ayaa xilli ciyaareedkii dhammaaday wareegiisa 8-da kaga hadhay Champions League waxaana ay ku baxeen gacmaha kooxdii wacdaraha soo dhigtay ee Ajax.
Kooxdan ka aasaasan magaalada Turin oo suuqa xagaagan isbedelo waaweyn samaynaysa ayaa la filayaa inay markale xilli ciyaareedka cusub dagaal weyn u geli doonto rumaynta riyadeeda Champions League.